Firefox Quantum yatove mune yayo beta vhezheni | Linux Vakapindwa muropa
Vanoda software yemahara uye pamusoro pezvose, vanoda Firefox browser, vava neBeta vhezheni yeFirefox 57 iripo, iri nani kuzivikanwa seFirefox Quantum. Vashandisi vanogona kutoedza uye voona kuti iyi browser nyowani ichave yakaita sei, iyo inovimbisa zvakawanda.
Isu tanga tatofungidzira pano, kuti Firefox Quantum ingave iri mhando big bang, kuberekwa patsva kweye fire fox browser, iyo kunyangwe panguva yayo yaive mambo, yanga iri mumumvuri weGoogle Chrome kwemakore. Neichi browser, Mozilla inotarisira kuhwina kumashure vashandisi vazhinji, kungave kuri paWindows, Mac, uyezve, Linux.
Mazuva mashoma apfuura, Firefox 56 yakabuda, iyo yakatounza zvimwe zvisaririra zvechazove Firefox 57, iyo ichatotora mukana wakazara weiyo nyowani tekinoroji yeQuantum. Panguva ino, yakawanikwa ichikurumidza kupfuura mamwe mabhurawuza, ichikurumidza zvakapetwa kaviri seFirefox 52.
Uyewo, iwe unoda kutora zvirinani mukana weva processor vane zvinopfuura imwechete musimboti, chimwe chinhu chinokonzeresa kuti bhurawuza harifanirwe kukanda yakawanda RAM ndangariro, rimwe rematambudziko makuru eFirefox munguva yakapfuura. Inotarisirwa kuzadzikisa kunwa kunosvika makumi matatu% kushoma ndangariro kana ichienzaniswa neshanduro dzekare.
Izvi zvave kubudirira kubva kune nyowani CSS injini, iyo yakagadziriswa muRush programming mutauro. Nenzira iyi, Firefox Quantum inozokwanisa kushanda pamakomputa ese, kunyangwe iwo ekare-kare. Neiyi nzira, zvinotarisirwa pakupedzisira kurova chinonyanya kushandiswa bhurawuza munyika, ndokuti, Google Chrome.
Panguva ino, Isu tinongova neBeta vhezheni uye kuchine iyo yekupedzisira vhezheni yekubuda, kunyangwe isu tiine sarudzo mbiri. Kutanga, isu tichakwanisa kurodha pasi Firefox 56, iyo inotova nezvimwe zvikamu zveQuantum uye chechipiri, tichakwanisa kudhawunirodha Beta vhezheni ye Firefox 57 kuburikidza pano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Firefox Quantum yatove mune yayo beta vhezheni
Juan Alpizar akadaro
Ini ndichafanirwa kuzviyedza painobuda, asi ini ndinofanira kuvandudza munzvimbo dzakananga kuti ndikwanise kuishandisa zvakare seyangu huru browser
Pindura Juan Alpízar
Miswe 3.2 inowanikwa